उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि कोसेली घर सञ्चालन | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि कोसेली घर सञ्चालन
on: April 22, 2019 प्रदेश समाचार, प्रदेश-गण्डकी
वैशाख ९, पर्वत । स्थानीय लघु तथा घरेलु उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि कोसेली घर सञ्चालन गरिएको छ । जिल्लाको मोदी गाउँपालिकामा लघु तथा घरेलु उद्यमी तथा कृषकद्वारा उत्पादित उपभोग्य वस्तुको एकीकृतरुपमा बजारीकरण गर्नका लागि कोसेली घर अर्थात् सौगातगृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
मोदी गाउँपालिका २ पातीचौर बजारमा पसल सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योगीद्वारा उत्पादित वस्तु अल्लो तथा ढाकाको कपडा, जुत्ता, कोट, ज्वारीकोट, साडी, सिस्नो धुलो, लप्सी तथा अदुवाको अचार, क्याण्डी, बाँसका मुडालगायतका तयारी सामग्री र कृषकद्वारा उत्पादित तरकारी, मह, स्थानीय खसीबोका तथा कुखुरालगायतको एकीकृत विक्री वितरण गरी कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले पसल सञ्चालन गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय मोदी गाउँपालिकाको सहयोगमा सो गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मोदी गाउँपालिकामा लघु तथा घरेलु उद्यमीको बाहुल्यता रहेको छ । उनीहरुले व्यावसायिक रुपमा विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् । अल्लो उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको मोदीमा उत्पादित अल्लोका तयारी सामग्री, ढाका, विभिन्न जडीबुटी, फलफूललगायतका सामग्री विक्री वितरणका लागि उद्यमी तथा कृषकलाई सहजहोस् भनेर सौगातगृह सञ्चालन गरिएको मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले बताए ।
मोदी गाउँपालिकाले उद्यमीको प्रवर्द्धनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रू. २० लाख र चालू आर्थिक वर्षमा रू. ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । सोही रकमले उद्यमीलाई व्यावसायिक सीप विकासका लागि तालीम, प्रविधि र मेशिन सहयोग गरेपछि घरेलु तथा लघु उद्यममा स्थानीयको आकर्षण बढेको गाउँपालिकाका लघु उद्यम शाखा संयोजक सीता शर्माले बताए । उनका अनुसार अहिले गाउँपालिकाभित्र ३०० भन्दा बढीको संख्यामा सक्रिय उद्यमी रहेका छन् ।
गाउँपालिकाका कुना कुनामा उत्पादित् वस्तु सौगातगृहमा ल्याएर छाडेपछि उद्यमीले तत्काल ५० प्रतिशत रकम पाउने र विक्री भइसकेपछि सतप्रतिशत रकम पाउने भएकाले सहज हुने भएको छ । मोदी गाउँपालिकाभित्रको उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र त्यहाँको उत्पादनले नपुगेमा अन्य क्षेत्रमा उत्पादित सामग्री खरीद गरेर विक्री गरिने सञ्चालक चन्द्र विकले जानकारी दिए ।
यसैबीच उक्त सौगातगृहको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले आइतवार उद्घाटन गरे । सो अवसरमा उनले अब निर्वाहमुखी उद्यमलाई व्यावसायिक बनाइने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताए । मुग्लिन, पोखरा विमानस्थल र राम्दीमा तीन ओटा यस्तै कोसेली घर सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि सरकारले रू.६० लाख विनियोजन गरेको उनले बताए । रासस
तस्वीर : नाउरा भीरमा पदमार्ग